Fandefasana faran-tsokona tsara indrindra - TopFillers
Home / Fandefasana ranon-tsakafo
Vehivavy mpamokatra milina fanodina milina
Product Description Fiompiana kely famokarana famokarana / famokarana Linia fametrahana amin'ny tavoahangy tavoahangy, ranon-drongon-drivotra, kapila, alim-bozaka fanenomana fiara, tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy. Ny antsipiriany amin'ny antsipiriany AT-L8, 12, 16 milina fanenana automatique AT-L dia an-tariby ny programa fandefasana microcomputer (PLC), sensor, photoelectric, famonoana pneumatika amin'ny iray amin'ireo fitaovana fandefasana teknolojia . Ampiasaina betsaka amin'ny sokatra voankazo, saosy soja, vinaingitra, rano mineraly, fanafody, simika, vovobony, fanjifana, vovo-dronono sy kojakoja toy ny famenoana famonoana. Mameno mari-pahaizana maimaika, tsy misy bubbles, tsy misy rano. Azo ampiharina amin'ny endrika samihafa 40-1000ml (anisan'izany ny ...
Fiatoana fanontam-pirinty mahaleotena
Ny fanamafisana ny vokatra: Ny famokarana solosaina dia manomboka ny solosaina PLC, ny solosaina Photoelectric, ny fiasan'ny pneumatika amin'ny fampidirana fitaovana fitrandrahana amin'ny teknolojia avo lenta. Fanaovana fantson-drano mahamay, Mamolavola setroka iray, fantsom-pandehanana termite dia afaka manidina any amin'ny faritry ny tavoahangy mba hanafoanana ny bubbles, mazavaina tsara, tsy misy bubbles, tsy misy loto mitete. Azo ampiasaina amin'ny famokarana rano mineraly, sokatra voankazo, toaka fisotro, sokatra soja, vinaigera, zava-manitra, fanafody Shinoa tompon-daka, mpiasa biolojika, pesticide, ilaina isan'andro, sns ...
Automatique capping machine, Fandefasana ranon-tsakafo
2-in-1 automatique tavoahangy fenoina sy kapila ho an'ny rano 1. Ny fitaovana izay mifandray mivantana amin'ny solika dia SUS304 (GMP), natao tany Sina. 2. Ny 3-in-1 dia ampiasaina indrindra ho an'ny sakafo, isan'andro, fandefasana fanafody kosmetika sy kapila. 3. Ny milina fanatobiana dia manamboatra ireo fitaovana elektrônika malaza manerantany, ny taham-pahavitrihana ambany, ny fahombiazan'ny faharetana, ny faharetan'ny fiainana. 4. Ny famenoana tsotra sy famenoana haingana ny fanamafisana amin'ny alàlan'ny fampisehoana an-tsehatra, endrika mahafinaritra. 5. Misy ny tsy fisian'ny tavoahangy tsy fenoina, ny fiakaran'ny vidim-pamokarana mahazatra. Tsy ilaina ny manova ny ampahany, ny tarehimarika isan-karazany amin'ny tavoahangy dia azo ovana haingana ho an'ny ...
Fanondranana Shampoo automatique sy ny famaranana
Ny fametrahana ny famokarana maodely (haingam-pandeha) dia ahitana ny 2 na asa toerana bebe kokoa: famenoana sy fandidiana, izay tarihin'ny PLC. Izy ireo dia natao manokana ho an'ny kojakoja, sakafo, solika, pesticide na orinasa orinasa simika amin'ny fampiasana haavon-drivotra midadasika na lehibe. Ny andian-dahatsoratra FCS II dia afaka manampy amin'ny famolavolana ny famokarana famokarana bebe kokoa ary mahatonga ny fitantanana ny famokarana ho mora kokoa, izay mahatonga azy ireo safidy tsara ho an'ireo orinasa na orinasa lehibe. Afaka manampy na mampihena ny toeram-piasana izahay araka ny fepetra manokana ilainao. Ny endri-pandaharana toy ny fametrahana ny fonosana AVF Series dia natao hametrahana ny vokatra avy amin'ny hafa.
E-liquid e-liquid ny famenoana milina famenoana
Fitaovana elektronika sigara NP-MFC e-liquid filling line fandefasana ampiasain'ny mpiasam-bary 1.Material preparation: Fito ampy tavoahangy, fametahana, fanafody ary fitsaboana, fametahana sy fanarona dia tokony ho feno fiarandalamby fanatodizana ary ao anatiny sy any ivelany tavoahangy toerana 2.Fahefan'ny tavoahangy: tonta mpanodina tavoahangy mametaka ny tavoahangy (fakan-kevitra) 3.Filling: Fanosorana amin'ny fanosorana ny tavoahangin-tavoahangy ho an'ny famolavolan-drakitra matevina, amin'ny fametrahana ny plastika indray mandeha indray mandeha fiara mameno, manakona, manarona, Amin'ny alàlan'ny fantsom-pandehan'ny peristaltic amin'ny tavoahangy silicone, any amin'ny toeram-pametrahana indray ny fanjaitra dia afaka mihetsiketsika manidina sy midina automatique feno ranom-boly ao anaty ...
Kitapo fanontam-pirinty ary fanoratana milina fanoratana
Ity milina fitrandrahana ity dia mety amin'ny rano tsy misy foly, voamaina avo lenta. Ny fametrahana tavoahangy fanatsarana ny kalitaon'ny tavoahangy dia atao automatique. Indrindra indrindra ho an'ny SL, EC, SC, menaka misy menaka, menaka fanosotra. Izany dia fitaovana tena tsara ho an'ny sakafo, medika, kosmetika, tsara chimique, indostrian'ny pesta. 1. Manaraka ny teknolojian'ny fandrindrana mekanika sy elektrika izy io. Ny famenoana fitenenana dia mora atao amin'ny alàlan'ny fanovana ny safidin'ny safidy. Tsy vitan'ny hoe mihena ny volan'ny famenoana 12, fa ny lamosina tsirairay ihany koa dia afaka miova tsikelikely. 2. Miaraka amin'ny teknolojia mibaribary, izay manao ny asa ...
Fitaovana fanosotra fanosotra vita amin'ny crème automatique
Ny milina fanariana crème automatique dia natao manokana mba hialana amin'ny vokatra avo lenta, toy ny crème, chili jam, saosy, menaka, vaseline, sns., Ary azo ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, kosmetika, pharmaceutika na indostria hafa. Ny milina masira dia naseho miaraka amin'ny fampifanarahana sarotra, ny fampitaovana mora, ny endrika ivelany, ary ny vondrona fantatra-marika. Ireo singa misy pneumatika dia avy amin'ny FESTO any Alemaina, na AirTac any Taiwan. Ny fitaovana misy ny tapany rehetra dia mifandray amin'ny vokatra dia vita amin'ny stainless steel 316L, izay ahafahan'ny milina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny GMP. Technical Parameters Fidio ny fitanana +/- 0.2ml Fandefasana haingana ...
Fitaovam-pitaterana enti-milina tanteraka
Famaritana milina fanoratana ho an'ny tavoahangy platina
Tavoahangy plastika indroa miboridana milina fanoratana ho an'ny shampoo
Vidim-bidiny Double Head Kolosely mameno milimetatra ho an'ny shampoo